आँखालाई आकर्षित बनाउने उपाय – Etajakhabar
आँखालाई आकर्षित बनाउने उपाय
ताजा खबर :- हाम्रो शरीरको आँखा सबैभन्दा सुन्दर र कोमल भाग हुन्छ, जसले मुटुको खबरलाई बिना संकेत नै बायान गर्छ । हाम्रो अनुहारमा सबैभन्दा सुन्दर र सबैभन्दा आकर्षित आँखा हुन्छ । शरीरको अन्य अंग जस्तै यसको हेरचाह पन अति आवश्यक हुन्छ । आँखालाई सही तरिकाले हेरचाह गर्नुको साथै आँखालाई आकर्षित र सुन्दर बनाउन पनि अति नै आवश्यक हुन्छ । आज हामी आँखालाई आकर्षित गर्ने उपायको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दैछौँ, जुन यस्ता छन् ।
आँखाको लागि गुलाबजलको प्रयोग
राती सुत्नुअघि आफ्नो आँखामा गुलाब जलको दुई थोपा हालेर सुत्नुपर्दछ । यसो गर्दा भोलिपल्ट बिहान तपाईको आँखामा ताजापन देखिन्छ ।
बदामको तेलले मालिश
यदि तपाईको आँखाको तल कालो धब्बा र रूखोपन भएको छ भने नियमित रूपमा बदाम तेलले आँखाको वरिपरी सुद्ध बदमको तेलले मालिश गर्नुपर्दछ । यसको लागि रंग फिंगरको प्रयोग गर्नुपर्दछ । यस कुरालाई ध्यान राख्न पनि अति आवश्यक हुन्छ कि तपाई केवल एकै दिशामा मालिश गर्नुहोस् । मालिश गर्नको लगभग पन्ध्र मिनेट भिजाएको कपासले आफ्नो आँखालाई सफा गर्नुहोस् । यसबाट तपाईको आँखा सदैव आकर्षित बन्छ ।
आँखालाई आकर्षित गर्ने एक उपाय कसरको उपयोग पनि हो । यसको लागि कसरको केही रेशा गुलाब जलमा एक घण्टाको लागि भिजाउनुहोस् । यसमा काट्नलाई राम्रो सँग भिजाएर आँखा बन्द गरी यसलाई आँखामा लगभग पाँच मिनेटसम्म राख्नुहोस् । यसो गर्दा आँखाको तल कालो घेरा कम हुनथाल्छ र तपाईको आँखा आकर्षित बन्न थाल्छ ।
राती सुत्नु अघि आफ्नो आँखाको मेकअप अवश्य हटाउनुहोस् । क्लेजिंग मिल्क आँखाको वरिपरी मल्नुहोस् र कपासलाई भिजाएर यसलाई पोछ्नुहोस् ।
। मेवाको प्रयोग
आँखालाई आकर्षित गर्नको लागि पाकेको मेवाको गुदीलाई राम्रो सँग मुछ्नुहोस् र यसमा एक थोपा मह मिलाउनुहोस् । अब यसलाई आफ्नो आँखाको वरिपरी लगाएर काक्राको टुक्रा राख्नुहोस् र पाँच मिनेट पछि यसलाई हटाउनुहोस् । यसबाट आँखाको त्वचामा अतिरिक्त निखार आउँछ ।
मह र अण्डाको प्रयोग
थोरै महमा अण्डाको सेतो भाग मिलाउनुहोस् र यसलाई आँखाको चारैतिर लगाउनुहोस् । बीस मिनेट पछि यसलाई चिसो पानीले धुनुहोस् । यो आँखाको तल हुने कालो घेरालाई हटाउन मद्दत गर्छ ।
आँखाको सुन्दरताको लागि आँखालाई आरामको निकै आवश्यकता हुन्छ । सुतेको समयमा आँखा बन्द हुन्छ, जसका कारण यसलाई प्राकृतिक मोइश्चराइजर मिल्छ, यसकारण कम्तीमा ८ घण्टाको प्रयाप्त निन्द्रा लिनुपर्दछ ।
बदाम र दूधको पेस्ट
बदाम र दूधलाई मिलाएर एक पेस्ट तयार गर्नुहोस् र यसलाई आँखाको तल कम्तीमा बीस मिनेट सम्म लगाएर राख्नुहोस् र चिसो पानीले यसलाई धुनुहोस् । यसले आँखाको कालो घेरालाई हटाई आँखालाई आकर्षित बनाउँछ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक २१, २०७४ समय: ०:३४:४४
फेसियलपछि यसाे गर्दै न गर्नुस्
तपाइलाई सानोतिनो कुरामा पनि झनक्क छिटो रिस उठ्छ ? त्यसो भए यसरि गर्न सकिन्छ रिसको व्यवस्थापन
गर्भावस्थामा सम्भोग कति उत्तम ?
नर्भिक अस्पतालले लापरवाहीको चरम पराकाष्ठा नाघ्दै विरामीको देब्रे खुट्टा चिर्नुपर्नेमा दाहिने खुट्टा चिरेपछि
घरमा रोप्नुपर्छ यी वनस्पती, जसले दुषित हावा शुद्धिकरण गर्छ – जानी राखौ
तपाईको काखी कालो भएको छ ? यदि छ भने सेतो बनाउँन यसौ गरौं (भिडीयो)
सफा र सुन्दर शहर बनाउन मुख्यमन्त्रीले जब नाली सफा गर्न थाले…
आफ्ना दाँत सेता र चम्किला होउन् भनेर कसले चाहन्न र ? जानौं किन हुन्छन हाम्रा दाँत पँहेला र यसलाई सेता कसरि बनाउने ?
नेपालमा बेलको महत्व बुझ्न नसक्दा जंगलमा खेर जाँदै